မန်စီ၌ တောအတွင်းစုပုံထားသည့် တရားမဝင်သစ်လုံးများ ဖမ်းဆီးရမိ - Yangon Media Group
မန်စီ၌ တောအတွင်းစုပုံထားသည့် တရားမဝင်သစ်လုံးများ ဖမ်းဆီးရမိ
မန်စီ၊ မတ် ၃ဝ- ကချင်ပြည်နယ် မန်စီမြို့နယ်တွင် တရားမဝင်သစ် များ စုပုံထားကြောင်း သတင်းအရ သစ်တောဝန်ထမ်းများနှင့် တပ် မတော်စစ်ကြောင်း၊ ပူးပေါင်းရှာဖွေ ခဲ့ရာ တရားမဝင်ကျွန်းသစ်လုံးများ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဗန်းမော်ခရိုင် မန်စီ မြို့နယ်အတွင်း တရားမဝင်သစ် များ စုပုံထားရှိကြောင်း သတင်း အရ မန်စီမြို့နယ်သစ်တောဦးစီး ဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးဇော်မိုးဦး နှင့် သစ်တောဝန်ထမ်းများ၊ နယ် မြေခံတပ်မှ ဗိုလ်ကြီးကျော်ဇင်ထွန်း နှင့် တပ်မတော်သားများ၊ မိုင်းနောင် ကျေးရွာရာအိမ်မှူး ဦးမောင်ငြိမ်း တို့သည် မတ် ၃ဝ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီခန့်က မန်စီမြို့နယ် ကောင်လွင် ကျေးရွာနှင့် မိုင်းနောင်ကျေးရွာအကြား နယ်မြေရှင်းလင်းရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ ရာ မန်သာကျေးရွာ- စီအူကျေးရွာ လမ်း ခန့်မှန်းမြေပုံအညွှန်း (ွု- ၉၉၆၂၇ဝ)နေရာ၌ တောအတွင်း စုပုံ ထားရှိသော တရားမဝင်ကျွန်းသစ် လုံး ၁၂ လုံး (၇ ဒသမ ၃၉၄ဝ တန်) သုံးပေအောက် ကျွန်းသစ်လုံး ၁၆ လုံး (၃ ဒသမ ၄၄၂ဝ တန်) စုစု ပေါင်းကျွန်းသစ်လုံး ၂၈ လုံး (၁ဝ ဒသမ ၈၃၆ဝ တန်)တို့ကို တွေ့ရှိ ခဲ့သည်။
”လက်ရှိမှာ သိမ်းဆည်းရမိတဲ့ တောအတွင်းကနေ တိုင်းတာပြီး သယ်ယူဖို့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု မန်စီသစ်တောဦးစီးဌာနမှ ဝန် ထမ်းတစ်ဦးက မတ် ၃ဝ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါတရားမဝင်သစ်များ အား ဖမ်းဆီးရမိသည့်နေရာမှ လုံ ခြုံစိတ်ချရသည့် မိုင်းနောင်ကျေး ရွာသို့ တပ်မတော်လုံခြုံရေးအကူ အညီဖြင့် သယ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး မန်စီမြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တစ်ဆင့် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း (ဗန်း မော်သစ်ထုတ်ရေးဒေသ)သို့ စနစ် တကျ လွှဲပြောင်းအပ်နှံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြောက်ကိုရီးယားက တာဝေးပစ်ဒုံးပျံစခန်းကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှု လုံးဝပြီးစီးသွားပြီဟု တောင်ကိ??
ဝမ်းတွင်းမြို့နယ် မြေတိုင်ကန်ကျေးရွာတွင် အောင်ဆန်းစုကြည် ကျောင်းဆောင်သစ် လွှဲပြောင်းပေးအ??